01 WRN STLỌ NKE LIVABLEAIR
--- Lekwasị anya na nyocha teknụzụ ikuku dị ndụ
Air duct n'elu ikpo okwu / Myọcha arụmọrụ ule / Okpomọkụ mgbanwe akpụkpọ ahụ ule
Nnwale ụdịdị dị iche iche na-eme mkpọtụ / Nnwale nnwale dị iche
02 Lekwasị anya n’ịduzi nkà na ụzụ
The Company nwere ọkachamara R & D injinia abuana ke ubi nke ọhụrụ ihe ọcha, ulo oru imewe, ebu imewe, akpaka akara, ule analysis na oru ngo management, na-enye pesonel nkwado maka ya onwe ha ọhụrụ na mgbanwe nke na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ rụzuru. Elydabere na ya ike R & D otu na ọgaranya ngwaahịa ahụmahụ na ngwaahịa mmepe na imewe, na Company si ngwaahịa n'ichepụta na àgwà akara nwere ike izute ndị ahịa na ahịa mkpa ka mma.
Green oru ngo
Efu net ike
03 Ike ike
--Core uru teknụzụ
Na-aga n'ihu oru nyocha na ọhụrụ bụ isi competitiveness nke WRN. WRN enwetala ihe karịrị 100 ụlọ na nke mba ofesi patent patent na ubi nke ihe ọhụrụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ elu ọgwụgwọ, ikuku ọcha, Central ventilashion usoro, ọgụgụ isi, wdg E wezụga, ọ na-ahọrọ dị ka a State-Ọkwa Advantage Enterprise na IPRs, Intelligent Manufacturing Anyị guzobere ụlọ ọrụ dị ka Livable Air Institute na Ọgwụgwọ Ọgwụgwọ. Site na teknụzụ na nyocha ọhụụ, anyị nwere ike ịhụ ọdịnihu anyị dabere na ahịa.
Enterprise technology ọhụrụ otu
Priselọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ
Ngwa oru ohuru
Institute nke injinia